Amazon ereela ihe karịrị ijeri ngwaahịa 5.000 site na mmemme Prime na 2017 | Akụkọ akụrụngwa
Amazon na-enye ndị ahịa ya mmemme PRIME, mmemme nke nwere ego kwa afọ dị iche iche na mba ọ bụla, na Spain ọ bụ ugbu a 19,99 euro ọ bụ ezie na dịka ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke asịrị ọ na-ezube ịbawanye na ọnụahịa, nke ndị ahịa na-enweta uru dị iche otu n'ime ha bụ mbupu n'efu na ịnweta ọrụ gụgharia vidiyo nke Amazon, ọ dịkarịa ala na Spain.
Companylọ ọrụ Jeff Bezos chọrọ ịmalite afọ site na ịkpọsa ụfọdụ ọnụọgụ dị ịrịba ama nke ikpo okwu rụzuru site na mmemme PRIME na nke na-enye anyị echiche nke olu ahịa nke ikpo okwu nwere, ma n'ime na n'èzí mmemme PRIME, na otu n'ime ha pụtara ìhè mbupu nke ihe karịrị 5.000 nde ngwaahịa.
N'ime 2017 dum, nnukwu ụlọ ọrụ e-commerce ezigala karịa 5.000 nde ngwaahịa n'efu, n'etiti nke Fire TV Stick na Echo Dot smart ọkà okwu pụtara ìhè, nke ikpeazụ karịsịa na United States. Ndepụta agbamakwụkwọ ahụ na Amazon na-emekwa ka ndị ahịa ya niile nweta ya enwekwala ọganihu dị egwu yana ọnụọgụ ngwaahịa ndị ọrụ agbakwunyela na ndepụta ha chọrọ.
Na United States, Amazon abụrụla otu n'ime ihe kpatara ọtụtụ ụlọ ahịa na-eji belata ọnụ ụzọ ha, ihe nke ọma na emebeghị na mba ndị ọzọ, mana ọ ga-abụ na omume a ga-agbasakwa oge, ọkachasị maka anyị ndị na-amasị igwe mmadụ, ọkachasị n'oge nke afọ mgbe ị na-azụ ahịa Ọ dị ka ibu ọrụ kama ntinye iji mee ememe otu ihe.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » Amazon ereela ihe karịrị 5.000 ijeri ngwaahịa site na mmemme mbụ na 2017